Fepetra Ankapobeny | mTomady.mg
Io tahirin-kevitra io dia mamaritra ny zava-boalaza sy fepetra ao amin’ny fifanarahana fototra ho an’ny fampiasana ny sahanasa mTOMADY : kitapom-bola amin’ny alalan’ny finday ho an’ny fitsaboana omena ny mponina Malagasy.
ANDININY 1 – FAMARITANA
Ny famaritana manaraka etoana dia hampiasaina ao amin’ireto FEPETRA ANKAPOBENY ireto:
“Mpitantana mTOMADY” dia midika ireo olona, ireo mpiara-miombon’antoka na ireo mpitantana ny mpamatsy ao amin’ny sehatra mTOMADY, na ny vatantenan’olona hafa rehetra tendren’ity farany, izay handray anjara amin’ny fanamorana ny fisoratan’ny Mpandray Tombontsoa amin’ny Sahanasa mTOMADY ary koa ny fifandraisany amin’ny sehatra mTOMADY.
“Mpandray Tombontsoa miankina” dia manondro ny tompon’ny Kaonty Miankina araka izay voafaritra ao amin’ny andininy [4.4].
“Mpandray Tombontsoa” dia ny mpanjifa izao misoratra ao amin’ny mTOMADY, ary manaiky ireo zava-boalaza sy fepetra ireo.
“Tombony” dia manana ny hevitra voafaritra ao amin’ny Andininy  (Tombony).
“Famantarana TAN” dia manondro ny famantarana izay azon’ny Mpandray Tombontsoa amin’ny alalan’ny SMS avy amin’ny sehatra mTOMADY mba hanamafisana ny fifanakalozana ao amin’ny kaontiny mTOMADY.
“Mpianto-bola/Sponsor” dia manondro izay rehetra olona, vondrona, orinasa, mpampiasa, fanjakana na fikambanana na vondrona tsy miankina amin’ny fanjakana izay mamatsy vola ny ampahany na ny tombony manontolo ao amin’ny Kaonty mTOMADY.
“Kaontin’ny banky voaaro” dia manondro ny kaonty fanefam-bola tànana any amin’ny mpiara-miombon’antoka banky na orinasa mpampiasa vola miara-miasa amin’ny sehatra mTOMADY mba handray ny vola narotsaky ny Mpandray Tombontsoa tao amin’ny kaontiny mTOMADY.
“Kaonty Miankina” dia manana ny hevitra izay omen’ny Andininy [4.4] azy.
“Kaonty Mobile Money” dia ny kaonty fanefam-bola tànana any amin’ny Mpamatsy ny Fanefam-bola amin’ny alalan’ny Finday an’ny Mpandray Tombontsoa.
“Kaonty mTOMADY” dia midika ny kaonty virtoaly manokana izay omena (mampiditra ny Kaonty Miankina izay ankinina aminy) ny Mpandray Tombontsoa. Io kaonty io dia azo ampiasaina malalaka ao amin’ny sehatra mTOMADY, izay azon’ny Mpandray Tombontsoa anangonana ny vola virtoaly ; ny vola virtoaly ao amin’ny kaontin’ny Mpandray Tombontsoa dia mampiseho ny vola miafina izay tànan’ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY ao amin’ny kaontin’ny banky voaaro.
“Petrabola tahiry” dia midika ny vola manontolo azo etsehina ao amin’ny Kaonty mTOMADY narotsaky ny Mpandray Tombontsoa na ny Mpandefa mandalo amin’ny Sehatra mTOMADY.
“Mpamatsy ny Fanefam-bola amin’ny alalan’ny Finday” dia manondro ny Sahanasa fanefam-bola amin’ny alalan’ny finday izay mpiara-miombon’antoka amin’ny Sehatra mTOMADY, ary izay omen’ny mpanelanelana ny vondrona mpikambana na ao amin’ny vondrona iray amin’ny Mpamatsy ny Karatra SIM ihany.
“Mpamatsy ny sehatra mTOMADY” dia midika Doctors for Madagascar (Artze fur Madagaskar e.V.) na vondrona hafa rehetra tendren’ny Doctors for Madagascar na miara-miombon’antoka amin’ity farany.
“Mpamatsy ny karatra SIM” dia manondro ny mpamatsy manao dika ny fahazoan-dàlana amin’ny karatra SIM (Subscriber Identification Module) ampiasain’ny Mpandray Tombontsoa mba hidirana amin’ny Sahanasa mTOMADY, izany hoe Telecom Malagasy (Telma), Airtel Madagascar, Orange Madagascar na izay orinasa hafa rehetra misahana ny raharaha momba ny finday manome ny tolotra momba ny karatra SIM sy mpiara-miombon’antoka amin’ny sehatra mTOMADY.
“Zaza tsy ampy taona” dia manana ny hevitra izay omen’ny Andininy [4.4] azy.
“Mpiara-miombon’antoka mTOMADY” dia midika CSB (Toeram-Pitsaboana Fototra), farmasia, laboratoara, hopitaly, na vondrona sy ivontoerana hafa rehetra miara-miasa amin’ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY.
« Sehatra mTOMADY » dia midika ny sehatra amin’ny alalan’ny finday izay an’ny sy tantanin’ny mpisahanasa mpamatsy ny sehatra mTOMADY, mba ahafahana sy hanamorana ny raharaha momba ny kaonty manokana mTOMADY an’ny Mpandray Tombontsoa, ary koa ny Sahanasa mTOMADY.
« Kitapom-bolam-pitsaboana amin’ny alalan’ny finday an’ny mTOMADY» dia vokatra manokana amin’ny Sahanasa mTOMADY sy ny hevitra nofaritana ao amin’ny andininy .
« Mpandefa» dia manondro ny olon-kafa izay mandefa ny vola mankany amin’ny kaonty mTOMADY an’ny Mpandray Tombontsoa amin’ny fampiasana ny laharan’ny finday an’ity farany ho toy ny laharan’ny kaonty.
« Sahanasa mTOMADY» dia midika ny Sahanasa omen’ny Mpamatsy ny sehatra mTOMADY amin’ny alalan’ny sehatra mTOMADY
ANDININY 2 – NY SAHANASA mTOMADY SY NY KITAPOM-BOLAM-PITSABOANA AMIN’NY ALALAN’NY FINDAY mTOMADY
Ny Sahanasa mTOMADY dia mikendry ny hanomezana ny fidirana amin’ny Sahanasa momba ny fitsaboana amin’ny mponina malagasy amin’ny alalan’ny kitapom-bolany momba ny vokatra amin’ny fitsaboana izay tantanin’ny rafitra tondroina hoe: ny sehatra mTOMADY. Mamporisika ny Mpandray Tombontsoa hanao tahiry izay tsy ho ampiasaina afa-tsy amin’ny fahazoana/ fandoavana ny Sahanasa momba ny fitsaboana any amin’ny toeram-pitsaboana nahazo fankatoavana, tobim-pahasalamana ary hopitaly (« mTOMADY kitapom-bolam-pitsaboana amin’ny alalan’ny finday».
Ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia ny mpanamora izay mametraka ny sehatra takiana ho amin’ny fanoratana sy ny fitrandrahana ny Sahanasa mTOMADY. Ny sehatra mTOMADY na ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia tsy ho fiantohana mihitsy na inona na inona mitranga, rafim-piantohana, rafitra momba ny fifarimbonana amin’ny loza mety hitranga, rafitra momba ny fiarovana ara-tsosialy, Sahanasa ara-bola, rafitra fanefam-bola na mpamatsy amin’ny alalan’ny finday na antokon-draharaha ara-bola, na ny Sahanasa hafa rehetra mitovy amin’izany izay mila ny didy amam-dalàna avy amin’ny Governemantan’i Madagasikara.
ANDININY 3 – FANEKENA NY FEPETRA
fisoratana anarana amin’ny Sahanasa mTOMADY sy amin’ny kitapom-bolam-pitsaboana amin’ny alalan’ny finday mTOMADY amin’ny alalan’ny fomba elektronika amin’ny lisitry ny safidy amin’ny finday (USSD na hafa) an’ny Mpandray Tombontsoa; na
fanaovana sonia ny taratsy ho fenoina momba ny fidirana amin’ny Sahanasa mTOMADY sy ny Kitapom-bolam-pitsaboana amin’ny alalan’ny finday mTOMADY, anisan’izany ny endrika matoa na ara-kajy mirindra amin’ny fifanarahana noraisina sy nalefan’ny mpitantana mTOMADY na ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY tamin’ny sehatra mTOMADY.
Ny Mpandray Tombontsoa dia manamafy fa efa namaky – izy tenany na nampamaky olon-kafa – mahazo sy manaiky ireo fepetra ankapobeny ireo.
Na izany aza anefa, ny fepetra ankapobeny dia azo jerena ao amin’ny tranonkala www.mtomady.mg sy/na amin’ny dikan-teny vita pirinty any amin’ny iray amin’ireo mpitantana mTOMADY na ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY.
ANDININY 4 – FOMBA ARAHINA MBA HANOKAFANA KAONTY mTOMADY
Mba hidirana amin’ny Sahanasa mTOMADY sy ny kitapom-bolam-pitsaboana amin’ny alalan’ny finday mTOMADY, ny Mpandray Tombontsoa dia tsy maintsy:
18 taona farafahakeliny ary manana ny zo feno araka ny lalàna;
manana finday misy karatra SIM sy kaonty Mobile Money noraketina am-boky tao amin’ny iray amin’ireo mpamatsy ny karatra SIM.
mamarana ny fizotry ny fisoratana anarana ary lasa mpikambana araka izany amin’ny sehatra mTOMADY.
manome ny filazalazana sy ny taratasy manaraka etoana:
ny anarana feno; sy
karam-panondromm-pirenena, karatra mpiorim-ponenana na pasiapaoro).
Ny Mpandray Tombontsoa dia hanokatra kaonty mTOMADY amin’ny alalan’ny fandraketana am-boky sy amin’ny alalan’ny fisoratana anarana amin’ny Sahanasa mTOMADY sy amin’ny kitapom-bolam-pitsaboana amin’ny alalan’ny finday mTOMADY, amin’ny alalan’ ny finday enti-tanana (USSD na hafa), na amin’ny fanaovana sonia ny taratasy ho fenoina fidirana ho mpikambana, toy ny matoany na endrika kajy mirindra ny fifanarahana raisina sy alefan’ny mpitantana mTOMADY na mpiara-miombon’antoka mTOMADY
Ny Mpandray Tombontsoa dia tsy afaka manokatra afa-tsy kaonty mTOMADY iray ihany amin’ny anarany (na firy na firy ny karatra SIM izay ananany), na inona na inona fandraketana am-boky ataony na miaraka amin’ny fanampian’ny mpitantana iray na ny mpiara-miombon’antoka nahazo fankatoavana avy amin’ny
Tsy misy kaonty mTOMADY na dia iray aza azo ho raketana am-boky ho an’ny olona latsaky ny 18 taona. Na izany aza anefa, dia afaka manokatra ny Kaonty Miankina iray, ampiarahina amin’ny Kaonty mTOMADY ny tompony ho an’ny olona latsaky ny 18 taona ka izy no mpiahy ara-dalàna («Zaza tsy ampy taona» iray) sy ho an’ny olona hafa rehetra na ny fianakaviany izay mety lasa Mpandray Tombontsoa (”Mpandray Tombontsoa Miankina)” iray) ny tombony (”Kaonty Miankina)” iray) . Ny zaza tsy ampy taona tsirairay Mpandray Tombontsoa sy miankina dia tsy azo raketina am-boky afa-tsy indray mandeha ihany amin’ny sehatra mTOMADY ary tsy maintsy hamafisina amin’ny alalan’ny fomba arahina mitovy amin’ny famantarana ampiharina amin’ny tompon’ny kaonty mTOMADY (fanamarinana takiana amin’ny zaza tsy ampy taona : sora-pahaterahana na taratasy fanamarinam-ponenana).
Ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia afaka manda ny fanokafana na manafoana ny fanokafana ny kaonty mTOMADY efa natao, raha toa ka tsy feno na tsy ara-dalàna ny fampahafantarana na ny antontan-taratasy omena amin’ny fomba arahina amin’ny famantarana. Mitovy amin’izany ihany koa ny Kaonty Miankina iray.
Ny Mpandray Tombontsoa dia afaka manampy ny vola amin’ny Kaonty mTOMADY avy amin’ny kaontiny ara-bola anaty finday amin’ny alalan’ny tolotra omen’ny mpamatsy finday ny mpitantana amin’ny fanefana amin’ny alalan’ny finday. Ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia afaka, na dia eo aza ny fepetra voalazan’ny Andininy [6.] (tombony) etsy ambany, mampitombo ny vola miaraka amin’ny tombony fanampiny na mametraka ireo farany ireo ampiasain’ny Mpandray Tombontsoa miankina.
Hisy torolalana amin’ny fahazoana miditra amin’ny sampan-draharahan’ny mpanjifa azo ampiasaina ao amin’ny www.mtomady.mg, amin’ny fitaovana fampahafantarana, fanabeazana ary serasera, eo anivon’ny mpitantana ny mTOMADY voamarina sy ny foibe misahana ny akalan’ny mpanjifa mTOMADY amin’ny laharana finday 556.
ANDININY 5 – FAHAZOANA MIDITRA AMIN’NY FITSABOANA
Ny sehatra mTOMADY no miantsoroka ny fampandehanana ny kitapom-bolam- pitsaboana amin’ny alalan’ny finday mTOMADY izay ahafahan’ny Mpandray Tombontsoa mandray ny vola sy mandrisika azy hanao fitsitsiana amin’ny fandoavana ny saran’ny fitsaboana.
Ny petrabola tahiry atao ao amin’ny kaonty mTOMADY dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin’ny fandoavana ny fandaniana momba ny fitsaboana ny Mpandray Tombontsoa, na ny an’ny Mpandray Tombontsoa miankina iray ary izany, ho an’ny Sahanasa rehetra omen’ny iray amin’ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY
Ny fampahafantarana mikasika ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY izay manome ny Sahanasa momba ny fitsaboana dia azo jerena ao amin’ny mtomady.mg, eo anivon’ny mpitantana mTOMADY ary koa eo anivon’ny foibe misahana ny akalan’ny mpanjifa mTOMADY amin’ny laharana finday 556.
Izay rehetra tolotra omen’ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY dia tsy maintsy mifototra amin’ny fifanekena ifanaovan’ny Mpandray Tombontsoa sy ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY. Raha toa ny fanefana takiana amin’ny Sahanasa omen’ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY ka mihoatra ny vola misy ao amin’ny kaonty mTOMADY’ny Mpandray Tombontsoa, io farany io na ny Mpandray Tombontsoa mainkina dia tsy maintsy mandoa ny vola mihoatra amin’izany.
ANDININY 6 – TOMBONY
Ny sehatra mTOMADY no mampiasa ny rafitry ny fampitomboana izay ahafahan’ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY mandray sy mamindra ny vola na tombontsoa hafa izay omen’ ny Mpianto-bola azy ho an’ny Mpandray Tombontsoa (ny « tombony » ). Ny tombony dia tsy zo ananana ho tombon-dahiny ho an’ny Mpandray Tombontsoa. Ny fanomezana ny Tombony dia avela tanteraka amin’ny fahendren’ny Mpianto-bola. Araka izany, ny Mpandray Tombontsoa dia tsy manana fahafahana hanao ny fitarainana amin’izany.
Tsy misy mihitsy ny fandoavana amin’ny Mpandray Tombontsoa na amin’ny lelavola na amin’ny sorabola na amin’ny fomba hafa rehetra, ny Tombony rehetra natao ho ampiasain’ny kaonty mTOMADY na kaonty miankina iray. Izany dia natokana irery ihany ho amin’ny fandoavana ny sahanasa momba ny fahasalamana nataon’ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY.
ANDININY 7 – FAMPITSAHARANA – FAMPIATOANA – FANAKATONANA NY KAONTY MTOMADY
Ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia afaka mampitsahatra ny kaonty mTOMADY (miaraka amin’ireo kaonty rehetra izay miankina aminy) sy mampiato ny raharaha rehetra momba ny fandraisana sy ny fandoavana vola madra-pisian’ny baiko vaovao, noho ny halatra, ny fahaverezana na ny tsy fetezan’ny karatra SIM.
Ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia hampitsahatra ny kaonty mTOMADY (miaraka amin’ny kaonty rehetra izay miankina aminy), ary ny vola rehetra narotsaky ny Mpandray Tombontsoa dia ho afindra mankany amin’ny karatra SIM ao amin’ny kaonty Mobile Money sy ny Tombony nomena ireo mpianto-bola isanisany, raha toa ny Mpandray Tombontsoa ka :
tsy nanatanteraka mihitsy raharaha tao amin’ny kaonty mTOMADY nandritra ny fe-potoana 12 volana mifanesy ;
tsy manaraka ireo fepetra momba ny fampiasana ny sahanasa mTOMADY na tsy manaja azy ireo ; izany dia araka ny fanehoan-kevitra araka ny tokony ho izy avy amin’ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY ;
tsy manana porofo mazava ahafahana manamarina ny mombamomba azy. Izany fanamarinana izany dia tsy maintsy atao farafahatarany amin’ny fotoana hisitrahana ny sahanasa momba ny fitsaboana eo anivon’ny mpiara-miombon’antoka mTOMADY iray.
Raha misy ny fanafoanana na fampiatoana maharitra ny kaonty mTOMADY, ny Tombony niditra (anisan’izany ny kaonty miankina) dia hofoanana sy ho averina any amin’ireo Mpianto-bola isanisany. Ny ambim-bola sisa tavela miabo hafa rehetra ao anatin’ny Kaonty mTOMADY na ao amin’ny Kaonty Miankina, izay nakana ny vola rehetra tsy voaloa (sara afakaratsaka) tamin’ny Mpiara-miombon’antoka mTOMADY, dia honerana avy amin’ny kaonty Mobile Money mahazatra eny amin’ny Mpamatsy ny Fandoavam-bola amin’ny alalan’ny Finday.
Ny Mpandray Tombontsoa dia afaka mampiato ny fifanarahana miaraka amin’ny mpamonona ny sehatra mTOMADY amin’ny fotoana rehetra amin’ny fiantsoana ny laharan-tariby an’ny foibe misy ny akalan’ny mpanjifa 556 sy amin’ny fisehoana amin’ny alalan’ny [famantarana TAN], na ao amin’ny mpitantana ny mTOMADY. Amin’izany tranga izany, ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia hampitsahatra ny kaonty mTOMADY (anisan’izany ny kaonty miankina rehetra) ary ny Tahiry rehetra narotsaky ny Mpandray Tombontsoa dia honerana amin’ny kaonty Mobile Money ao amin’ny mpamatsy ny Fandoavam-bola amin’ny alalan’ny Finday voakasika ary ny tombony dia ho averina amin’ny mpianto-bola isanisany.
ANDININY 8 – SARA SY LOLOHA
Maimaimpoana ny fampiasana ny sahanasa mTOMADY.
ANDININY 9 – FIAROVANA NY ZAVA-PANTATRA SY FIFANDRAISANA
Amin’ny fampiasana ny sahanasa mTOMADY, ny Mpandray Tombontsoa rehetra dia manome ny fanomezan-dalany amin’ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY mandritra ny fisoratany anarana, mba handraketana am-boky ireo zava-pantatra rehetra mikasika ny fampiasana ny sahanasa mTOMADY sy mba hanaparitahana na hamoahana ireo zava-pantatra ireo avy amin’ny fanafenana ny anarana sy fitanana tanteraka ny tsiambaratelon’ireo mpandray anjara voakasika toy ny mpampiasa vola hamokarana, ny mpianto-bola, anisan’izany Governemanta Malagasy. Izany dia ahitana ireo fampahafantarana mikasika ny sahanasa momba ny fitsaboana ampiasaina sy aloa avy amin’ny kaonty mTOMADY.
Amin’ny fampiasana ny sahanasa mTOMADY, ny Mpandray Tombontsoa dia manome alalana ny mpamonona ny sehatra mTOMADY mba hifandray aminy amin’ny alalan’ny fomba samihafa, anisan’izany ny fifandraisana amin’ny alalan’ny SMS, ny finday, ny famelan-kafatra am-peo na an-tsary, ny taratasy alefa amin’ny alalan’ny elektronika na ny mpanelanelan’ny mpitantana mTOMADY.
Ny fifandraisana sansantsany eo amin’ny sehatra mTOMADY sy ny Mpandray Tombontsoa dia hamarinina amin’ny alalan’ny fomba arahina momba ny famantarana araka izay voafaritra ao amin’ny Andininy faha-2.
ANDININY 10 – FANOVANA NY SAHANASA MTOMADY
Na dia eo aza ny fepetra hafa rehetra voalazan’ny fepetra ankapobeny, ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY sy ny olona nomeny fahefana dia manan-jo hanova, hampiato, hanafoana na hampitsahatra ny fidirana amin’ireo vokatra atolotry ny sehatra mTOMADY, ny votoatiny rehetra na ny fitaovana rehetra hafa ahitana ny ampahany amin’ny Sahanasa mTOMADY amin’ny fotoana rehetra, tsy misy fampilazana mialoha. Na amin’ny tranga manao ahoana na manao ahoana, ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia tsy ho tompon’andraikitra amin’ireo fanovana sy fiovana ireo. Ity farany dia afaka ihany koa mametraka ny fameperana mikasika ny fampiasana sy fidirana amin’ny fahafaha-miasa sasantsasany na ampahany amin’ny Sahanasa mTOMADY tsy misy fampilazana mialoha ary tsy misy fampidirana ny andraikiny.
Raha toa ny sosom-panovana na fanovana amin’ny Kitapom-bolam-pitsaboana amin’ny alalan’ny finday nataon’ny mpamatsy ny sehatra, ity farany no hiantoka fa ireo fanovana dia tsy manohintohina amin’ny fomba tsy marina ny kaonty mTOMADY ary hampahafantatra ny Mpandray Tombontsoa ny fanovana natao. Raha toa ny Mpandray Tombontsoa ka manohy ny hampiasa ny Kitapom-bolam-pitsaboana amin’ny alalan’ny finday ao aorian’ny faharaisana izany fampahafantarana izany, izy dia heverina fa nanaiky ny fepetra vaovao. Amin’ny tranga mifanohitra amin’izany, ny Mpandray Tombontsoa dia manan-jo hanafoana ny kaonty mTOMADY ananany.
ANDININY 11 – FANOVANA NY FEPETRA ANKAPOBENY
Ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia manana ny fahazoana hanova ireo fepetra ankapobeny ireo mba hanarenana na hanampiana ny famarafaran-teny fanampiny ilaina. Ireo fanovana ireo dia ho ampahafantarina ny Mpandray Tombontsoa, farafahakeliny efatra ambiny folo (14) andro mialoha. Raha toa ny Mpandray Tombontsoa ka manohy ny fampiasana ny Sahanasa mTOMADY, izy dia heverina fa nanaiky ny fepetra vaovao.
ANDININY 12 – FEPETRA ANKAPOBEN’ NY FAMPIASANA
Amin’ny maha mpampiasa noraketina am-boky amin’ny Sahanasa mTOMADY, ny Mpandray Tombontsoa dia afaka manokatra kaonty mTOMADY. Tsy maintsy hanaiky ny tsy hanambara ny filazalazana ny kaontiny amin’ny olon-kafa. Tompon’andraikitra irery momba ny tsiambaratelo sy ny fitanana ny fiarovana ny kaontiny, sy ny raharaha rehetra izay natao amin’ny na amin’ny alalan’ny kaonty mTOMADY ananany, ary manaiky ihany koa ny hampilaza avy hatrany ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY amin’ny fandikan-dalàna rehetra momba ny fiarovana ny kaontiny. Ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY dia tsy ho tompon’andraikitra amin’ny fatiantoka vokatry ny fampiasana tsy nahazoana alalana amin’ny kaonty mTOMADY.
Ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny Mpandray Tombontsoa ara-dalàna hanao ny fifanakalozana amin’ny alalan’ny elektronika na hanao Sonia ny fifanarahana dia atao amin’ny alalan’ny fanoratana ny Sahanasa omen’ ny mTOMADY. Ny Mpandray Tombontsoa dia manaiky fa ny fanoratana amin’ny alalan’ny elektronika no mampivoitra ny fifanarahana nataony sy ny finiavany hifandray sy hanatanteraka ny fifanakalozana nangatahana, ary izay nampiharina amin’ny taratasy rehetra mahakasika ireo fifanakalozana nifanaovana, tafiditra amin’izany ny hevitra momba ny fanafoanana, ny politika, ny fifanarahana ary ny fangatahana.
Tsy azon’ny Mpandray Tombontsoa atao ny mamindra ny zony sy ny andraikiny avy amin’ny fifanarahana miaraka amin’ny sehatra mTOMADY amin’ny olon-kafa.
Raha toa ny ampahany amin’ny Zava-boalaza sy Fepetra ka heverina fa tsy manan-kery na tsy azo ampiharina, izany dia tokony hovoaboasana amin’ny fomba mifanaraka amin’ny lalàna manan-kery eto Madagasikara mba hitarafana, araka izay azo atao, ny finiavana tam-boalohany.
ANDININY 13 – FAMERANA SY FANILIHANA NY ANDRAIKITRA
Na dia mandray ny fisorohana rehetra sy ny fepetra araka ny tokony ho izy aza ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy, mba hiantohana fa ny filazalazana nomena raha miohatra amin’ny kitapom-bolam-pitsaboana mTOMADY amin’ny alalan’ny finday dia marina , mba tsy hisy mihitsy ny fatiantoka na fahavoazan’ny Mpandray Tombontsoa amin’ny fampiasana ny Sahanasa mTOMADY, ny Mpandray Tombontsoa dia manaiky fa azy tanteraka ny fampiasana ary mandray manontolo ny andraikitra amin’izay rehetra mety ho fatiantoka na fahavoazana ateraky ny fampiasana ny Sahanasa mTOMADY. Na izany aza anefa dia tsy andraikitrin’ny Mpandray Tombontsoa, ny tsirambina rehetra ataon’ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY na ireo mpitarika ao aminy, mpiasa, mpiantoka mpanampy na mpitantana. Ny Mpandray Tombontsoa dia mijanona tanteraka ho tompon’andraikitra amin’ny fahamarinanan’ny zava-pantatra amin’ny kaontiny mTOMADY.
Amin’ny fampiasana ny Sahanasa mTOMADY, ny Mpandray Tombontsoa dia manaiky amin’ny alalan’ity Fetpetra ankapobeny ity fa nisoratra anarana an-tsitrapo sy tsy misy faneriterena amin’ny Sahanasa mTOMADY ary tsy manana zo ara-dalàna na dia iray aza hanery ny Mpamatsy ny sehatra mTOMADY hanome azy ny fidirana amin’ny fampiasana ny Sahanasa mTOMADY.
Ny Mpandray Tombontsoa dia manaiky ihany koa fa ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY sy ireo mpitarika, mpiasa, mpitantana ary ny mpiara-miombon’antoka ao aminy dia tsy ho tompon’andraikitra amin’ny fahaverezana na amin’ny fahavoazana rehetra ao anatin’izany, tsy misy famaritana amin’izany, ny fahavoazana mivantana, tsy mivantana, manokana, fanampiny, mifanesy na anasaziana rehetra, na amin’ny fifanarahana, amin’ny lalàna, amin’ny fahadisoana tsy natao fanahy iniana na fomba hafa avy amin’ny :
antony tsy azo anoharana na ny zava-misy hafa rehetra sendra tsy voaramaso na tsy fantatry ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY, ao anatin’izany ireo fifandirana eo amin’ny asa, ireo asa fampihorohoroana na ifaninanana ; na
fahasimbana na fahaverezan’ny fahampafantarana rehetra ao amin’ny finday an’ny Mpandray Tombontsoa raha toa ka tafiditra tao amin’ny findainy ireo fandaharana tsy irina na ny fitaovana, rafi-baovao sompatra, ireo chevaux de troie, ireo vers, ireo virus tamin’ny fampiasana ny Sahanasa mTOMADY. Voalaza amin’ny fampiasana ny Sahanasa mTOMADY, ny Mpandray Tombontsoa dia mandray ireo fepetra rehetra marina mandritra ny fandefasana sy ny fandraisana ireo zava-pantatra amin’ny alalan’ny Kitapom-bola amin’ny alalan’ny finday ho an’ny fitsaboana ny mTOMADY ;
izay rehetra fahaverezana nitranga nohon’ny votoatiny tsy mazava tsara, ny fahaverezana na ny tsy fahafahana mijery ny zava-pantatra na ny tsy fahafahana miditra ao amin’ny Sahanasa mTOMADY izay tsy miankina amin’ny finiavan’ny mpamatsy ny sehatra mTOMADY ;
zavatra rehetra ao anatin’ny tranonkala na ny Sahanasa ataon’olon-kafa na ny mpiara-miombon’antoka amin’ny tambanjotram-pifandraisana.
ANDININY 14 – FITSARANA MAHEFA SY FANDRAVONANA NY FIFANDIRANA
Ny Mpandray Tombontsoa dia afaka miantso ny foiben’ny Sahanasan’ny mpanjifa ny mTOMADY amin’ny laharan’ny finday 556 mba hampahafantatra ny fifanolanana rehetra na ny fitarainana rehetra mikasika ny kitapom-bola amin’ny alalan’ny finday ho an’ny fitsaboana mTOMADY mandritra ny faharetan’ny fifanarahana.
Ny fifanolanana avy amin’ireo Sahanasa nataon’ny mTOMADY na avy amin’ireo fepetra ankapobeny dia haravona aloha amin’ny alalan’ny fombafomban’ny raharaham-pihavanana amin’ny andaniny sy ny ankilany.
Raha tsy mahomby ny raharaham-pihavanana amin’ny fifanolanana na ny fitarainana, ny hany fitsarana mahefa dia ny fitsarana ao Antananarivo.
Ireo fepetra ankapobeny amin’ny fampiasana ny Sahanasa dia hofehezin’ireo lalàna manan-kery eto Madagasikara.
Raha misy fanontaniana tsy hitanao ato na tsy mazava aminao ny valiny, dia antsoy maimaimpoana ny 556
Près-Lot II Y 53bis | Rue Dr Rabenoro | Antananarivo, Analamanga 101 | Madagasikara